काठको सरकारी र बजार मूल्यमा किन ठूलो अन्तर ? « Naya Page
काठको सरकारी र बजार मूल्यमा किन ठूलो अन्तर ?
प्रकाशित मिति :2May, 2018 12:30 pm
काठमाडौँ, १९ बैशाख । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु ८०० छ, तर सोही काठ चिरानपछि बजारमा झण्डै रु ६ हजारका दरले बिक्री हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रतिवेदनले उक्त मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याएको हो । कर्पोरेसनले हाल सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट न्यूनतम् रु एक हजार ४७१ मा र चिरान गरी अधिकतम् रु तीन हजार ५४० मा बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।
नियमावलीको व्यवस्था र कर्पोरेसनबीच काठको मूल्यमा देखिएको अन्तरका सम्बन्धमा कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले वन नियमावलीले उल्लेख गरेको मूल्य गोलिया काठको राजश्व भएको स्पष्ट गर्दै भने, “हामीले काठ कटान र ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्च तथा नाफा जोड्दा नियमावलीमा उल्लेख मूल्य भन्दा निश्चित रुपमा बढी हुन्छ ।”
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकालले बिचौलियाका कारण काठको मूल्यमा प्रति घन फिट एक हजारसम्म मूल्य बढेको बबताए ।
अध्यक्ष ढकालले प्रतिवेदनले औंल्याएको अनुसार बजार मूल्य नभएको खण्डन गर्दै हाल सालको काठ प्रति घन फिट रु पाँच हजारको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिए ।
कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक लौडारीले २०७४ साल जेठबाट मात्रै भुकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न शुरु गरेकाले उक्त प्रतिवेदनमा कम परिणाम देखिएको बताए ।
कर्पोरेसनमा हालसम्म करिब दुई हजार भूकम्पपीडित परिवारले काठ मागका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ९०६ भूकम्पपीडित परिवारलाई ४४ हजार ४७८ घन फिट काठ उपलब्ध गराइसकेको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न टिम्बर कर्पोरेशनलाई वन मन्त्रालयले गत आवमा एक लाख ५५ हजार ३२८ घन फिट काठ उपलब्ध गराएकोमा उक्त काठ हालसम्म वितरण भइरहेको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।